Daytrips Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: Daytrips
နေအိမ် > Daytrips
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီဖက်ရှင်မြို့တော်အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ resplendent ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, architecture and beautiful…